Oktoberfest(Fetin’ny Labiera) Ao Lomé, Togo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2013 23:00 GMT
Fetin'ny Labiera ao Togo ao Lomé, Togo tamin'ny alàlan'ilay Togo actualités
Ny volana oktobra mazàna dia fankalazana ny fetin'ny Labiera any Alemana. Ary efa miha lasa fomba fanaon'ny mponina ao Togo tsikelikely koa izany. LoveJoyce Amavi, bilaogera iray ao Lomé, renivohitr'i Togo, dia nanameloka ny faharatsian'izany fankalazana izany ao amin'ny tanànany. Nanoratra izy ao anatin'ny “L‘âge de la bière” (taonan'i Labiera) [fr] hoe :
Any Alemana, mpamorona azy sady mpamokatra Labiera be indrindra, ny Oktoberfest dia fomba fanao mahazatra hiangonan'ny mponina hifaliana am-pilaminana. Kanefa eto amintsika isan-taona, fotoana ho an'ireo mpimamo hanaovana fihetsika mahaletra ny fahalalahan'ny fahazoana mandray zava-pisotro misy alikaola [..] Mampalahelo be ahy ny fahitàna ireo tanora 100 000 mamonjy ilay fetin'ny Labiera sy ny fahitàna fa eo amin'ny 300 eo ihany ireo tonga mamonjy ireny foara/fetiben'ny asa ireny.